သူရ(ဦး)ရွှေမန်း ကိုအမှတ်ပေးခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » သူရ(ဦး)ရွှေမန်း ကိုအမှတ်ပေးခြင်း
Posted by awra-cho on Feb 8, 2012 in Society & Lifestyle | 12 comments
ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော့် ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ပါ။ ကျွန်တော်က လူပုဂ္ဂိုလ် အဓိက မထားပါဘူး၊ အကြောင်းအရာ ကိုပဲ စဉ်းစားတာပါ၊ အစိုးရ ဘာလုပ်လုပ် မကောင်းပြော တဲ့ထဲ မှာ မပါ ပါဘူး၊ အများ အကျိုးရှိတဲ့ ဘက်ကို ရပ်တည်ပါတယ်။
ဖြေလျော့မှုတွေ ရှိလာတော့ တိုင်းပြည်တိုးတက် တော့မယ် ဆိုပြီး ဝမ်းသာတာပေါ့ ဗျာ၊ ဂျာနယ်တွေကလည်း ပြောကြတာကိုး မနက်ဖြန်ပဲ ဆန်ရှင် ရုပ်တော့မှာ လိုလို ဆိုတော့။ ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်ခေါ်တော့ မေးခွန်းတွေ မေးကြ ရော ။ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးတွေ အဖြေ ကြားတော့ စိတ် တော်တော် ကုန်သွားတယ်။ အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မရဘူးတဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေရ။ ပညာရေးဆိုတော့ လည်း ကောင်းလိုက်တာ နှစ်သုံးဆယ် စီမံကိန်း နဲ့ ဘာနဲ့။ ဆက်သွယ်ရေး ၊တရားရေး ။ အိုး စုံလိုက်တာမှ တခြားဘယ်နိင်ငံ မှ လိုက်မီမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါ့စကားနွားရ ပြောလိုက်တာ ရွှန်းရွှန်းကို ဝေလို့ ။ အပြင်မှာ တခြားစီ ။ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတယ် ၊ သူတို့က အပြင် မှာ ဖြစ်နေတာကို မသိ လို့လား၊ သိသိကြီးနဲ့ ပြောနေတာလား။ ငါ ဘာပြောပြော ယုံမယ့်ကောင်တွေ လို့ထင်လို့လား။ နားထောင်မိတော့ ဒေါသ ဖြစ်မိတယ်။ အပြင်မှာ တစ်ကယ်ဖြစ် နေတာကို အရင်ဆုံး လက်ခံမှ နောက်တစ်ဆင့် ပြင်လို့ရမှာပါ၊ မှားနေတာ တောင်မသိ ရင်၊ လက်မခံရင် ဘယ်လိုမှ ပြင်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးလေ၊
သူရ(ဦး)ရွှေမန်းက မနေ့က လက်ရှိအခြေ အနေ တွေကို ထင်ဟပ်ပြ သွားတယ်။ မှားနေတာတွေ ကိုသေချာပြော သွားတယ်။ အရင်တုန်းက သူလဲ ပါခဲ့တာပဲ။ အခုတော့ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးတွေ ကို ကျကျနန ပြောသွားလေရဲ့။ ဘာပဲ ပြောပြော သူပြောသွားတဲ့ လေ သံကို ကြိုက်မိသွားကြောင်းပါ။ အစိုးရ က ရုူးချင်ယောင် ထပ် မဆောင် ဖို့ပဲ လိုတော့တာပါ။
နောက်ဆုံး အချုပ် ပြောရရင်တော့ သူရ(ဦး)ရွှေမန်း ကိုအသိအမှတ်ပြု ပြီး နိုင်ငံတည် ဆောက်ရေး အတွက် အားကိုးမိကြောင်းပါ ခင်ဗျား….
(လွတ်လပ်စွာ သဘော ကွဲလွဲ ခွင့် ရှိပါ ကြောင်း)
“ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော့် ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ပါ။ ကျွန်တော်က လူပုဂ္ဂိုလ် အဓိက မထားပါဘူး၊ အကြောင်းအရာ ကိုပဲ စဉ်းစားတာပါ၊ အစိုးရ ဘာလုပ်လုပ် မကောင်းပြော တဲ့ထဲ မှာ မပါ ပါဘူး၊ အများ အကျိုးရှိတဲ့ ဘက်ကို ရပ်တည်ပါတယ်”
သဘောထားခြင်းတိုက်ဆိုင်တယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်လဲလူပုဂ္ဂိုလ်၊စနစ်၊ဝါဒ၊ ဆိုတာတွေကိုအဓိကမထားပါ၊ ကျွန်တော်၂၀၀၈ကတည်း ဒီမှာဝင်ခဲ့တာပါ၊post တစ်ခုမှမရေးခဲ့သေးပါ။ တစ်နေ့ရေးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဘူးပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့၊ လွတ်လပ်စွာဆဲခွင့်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့၊ Mandalay Gazette ကိုအဆင့်အတန်းရှိတဲ့ Siteဖြစ်စေချင်ပါတယ်။(လွတ်လပ်စွာ သဘော ကွဲလွဲ ခွင့် ရှိပါ ကြောင်း)
အကိုက ပထမအနေနဲ ့….“ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော့် ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ပါ။
ကျွန်တော်က လူပုဂ္ဂိုလ် အဓိက မထားပါဘူး၊ အကြောင်းအရာ ကိုပဲ စဉ်းစားတာပါ၊ အစိုးရ
ဘာလုပ်လုပ် မကောင်းပြော တဲ့ထဲ မှာ မပါ ပါဘူး၊ အများ အကျိုးရှိတဲ့ ဘက်ကို ရပ်တည်ပါ
ပြီးတော့ စာရွက်ပေါ်နဲ ့လေသံတွေ ကောင်းသလောက် အပြင်က လက်တွေ ့ဘဝတွေမှာ
ဆန် ့ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေတာကို ထောက်ပြဝေဖန်နေပေးတော့ အစိုးရမကောင်းကြောင်းပြောနေတာ
တော့ နည်းနည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ဒါက အဖြစ်မှန်ကိုပြောနေတာပါ နော်အကို။စိတ်မဆိုးကြေးပါ။
ဦးရွှေမန်း မိ်န့်ခွန်း နားထောင်ဖြစ်လိုက်တယ် ။ အမှန်တွေ ပြောသွားပါတယ် ။ ဒါကိုတော့ နဲနဲတော့ အံဩမိတယ် ပြောရမယ် ။ စနားထောင်တာ တော့ နားထောင်ခြင်လို့မဟုတ်ဘဲ နောက်ပိုင်း စိတ်ဝင်စားလာပြီး အပြီးထိ နားထောင်ဖြစ်သွားတယ် ။ သူ မိန့်ခွန်းမပြောတတ် ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ပြော သွားတာတွေက အမှန်တွေ များနေ လို့ အများကြိုက်များ ဖြစ်အောင် ပြောနေသလားလို့တောင် သံသယ ပွားသွားမိပါတယ် ။ ပြောတာတွေ ပြုပြင်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ အလွန် ကောင်းပါတယ်။ စောင့်ကြည့် ကြတာပေါ့ဗျာ ။ မျှော်လင့်ချက်တွေ ဖြစ်စေတာတော့ အမှန်ပါ။
ဦးရွှေမန်းပြောနေတာက ရင်ထဲမှာတကယ်ရှိလို ့ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ဒါပေမယ့် အထက်မှာရော၊အောက်ခြေမှာပါ
ပျက်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပေါ့….(၁)ဦးသိန်းစိန်
(၂)သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦး(၃)ဦးကျော်ဆန်း(၄)ဦးခင်ရီ(၅)ဦးခင်မောင်မြင့်တို ့အစသဖြင့်ပေါ့ အရင်စစ်အစိုးရရဲ ့လက်ကျန်
လူဟောင်းတသိုက်ကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်လိုက်မှအားလုံးအသွင်ပြောင်းပြီး လှပတဲ့ နေ ့သစ်ဆီသွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်လျှက်။
အဲ့ နာဂရ ချစ်သူပြောတာကိုကန့်ကွက်ပါတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့အတွက်ခုချိန်မှာ အရင်လူ ဒီလူ သူ့လူ ငါ့လူနဲ့ ရန်ဖြစ်နေဖို့အချိန်မရှိတော့ပါဘူး။ အပြုသဘောနဲ့ပြော၇ရင် အရင်သန်းရွှေလက်ထပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင် သူတို့ဘက်ကလဲလျော့ပေးနေပြီပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်ဗျာ သန်းရွှေလက်ထပ်တုန်းက ဒေါ်စုကိုမလွှတ်ပေးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတတ်နိင်လဲ ဒါပေမဲ့အခု သူလွှတ်ပေးလိုက်တယ်လေ လွှတ်ပေးတဲ့အပြင် pass အပြည့်ဝမပာုတ်တောင် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားပါတယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်ဗျာ ဦးသိန်းစိန်သာမလွှတ်ပေးရင်
ဒေါ်စု ကိုကော ကိုမင်းကိုနိင်တို့ကိုကော ဒီတစ်သက်တွေ့ရတော့မှာတောင်မပာုတ်ပါဘူး ခုချိုန်မှာလူသစ်တွေလူပောာင်းတွေခွဲခြားမနေသင့်တော့ပါဘူး ဒါပာာလဲ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်မပာုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ပါကြောင်း
ဥပဒေအပေါ်မှာနေ နေတာလဲသူတို့တွေဘဲလေ ဒါကြောင့်
ဘာပြောတာလဲ သိချင်သူတို့အတွက် ..
စာရေးသူရေ အမှတ်တွေဇွတ်ပေးမနေပါနဲ ့အုံး။
စောင့်ကြည့်ပါအုံးနော်။အပြောနဲ ့အလုပ်ညီဖို ့လို
အပြောကရွှေမန်း အက ကချိုမိုင်မိုင် ဖြစ်နေတဲ့ အခွင့်အရေးသမားပါ လွှတ်တော် ဥက္ကဌဖြစ်ပြီး လပိုင်း
အကြာမှာ သစ်တောက သစ်တန်(၁၀၀) ပါမစ်ယူရောင်းစားလိုက်တာ သိန်း(၅၀၀)ကျော်ရသွားတယ်လေ ဂုဏ်သရေရှိ ရာထူးရထားပြီး ကိုယ့်သိက္ခာကိုယ် မထိန်းသိမ်း မငဲ့ကွက်တဲ့ ကြောင်ချေးပါ
အဟမ်းအဟမ်း…. အောင်ပုရေ ငါအသံဝင်နေလို့ …လာဆဲပါအုံး…။
ဝင်ရောက်ဆွေးနွေး သုူအားလုံး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။ လခ တိုးပေးပြီးသွားရင် ပိုတင်ပါ့မယ်။